Bayantshontshana emveni kwesivumelwano sobumbano eLibya - Bayede News
Bayantshontshana emveni kwesivumelwano sobumbano eLibya
Amadoda ahlomile abulale umkhuzi wamasosha wasempumalanga yezwe owayefunelwa amacala ezempi ngesonto eledlule, lokhu kushiwo ngabezempilo. Lesi sigameko sigcizelela ubungozi bokwanda kodlame eLibya okuletha inselelo enkulu kuHulumeni wobumbano omusha.
UMahmoud al-Werfalli udutshulwe esemotweni engaphandle kwesibhedlela eBenghazi kanye nonogada bakhe ababili, kusho imithombo ekwezempi. Lokhu kwenzeka nje kuyanda ukungezwani phakathi kwamaqembu angabhekani empumalanga yaleli lizwe.
UWerfalli ubengumkhuzi wamabutho angaphansi kweqembu likaKhalifa Haftar iLibyan National Army (LNA), okuwumfelandawonye wamabutho aphethe empumalanga yaleli lizwe kule minyaka edlule.
I-International Criminal Court (ICC) sekukabili imangalela uWerfalli ngamacala okusolwa ukuthi ubulala abantu abathunjwa ababengaphezu kwamashumi amane kuphinde futhi kufake phakathi isigameko sangowezi-2018 lapho kwavela izithombe zimkhombisa edubula iziboshwa eziyishumi ezazivalwe amehlo.
NgoNdasa uvele kuvidiyo eyasabalala kakhulu ehlasela igumbi lokubonisa izimoto eBenghazi ehambisana namabutho akhe ayehlobe ngomfaniswano wezempi ofanayo, lapho bavela belimaza ifenisha kanye namakhompyutha njengoba bebekisa izikhali.
Ukuxabana phakathi kwamaqembu ahlukile empumalanga yaleli zwe sekukhule kakhulu njengoba kuqhubeka izinsuku futhi lokhu kungagcina sekubakhona ukuhlasela okuwuchungechunge lokuziphindiselela, kusho uTarek Megerisi we-European Council on Foreign Relations.
“Ngicabanga ukuthi lena kuzoba ingqinamba enkulu yokuqala lo Hulumeni owaziwa ngokuthi yiGovernment of National Unity (GNU).”
IGNU yafungiswa isifungo sehhovisi ngoNdasa, ithatha izintambo kubaphathi ababili abayizimbangi basempumalanga kanye nasentshonalanga abahola leli zwe iminyaka njengengxenye yemizamo ye-United Nations yokwenza noma yokuthola ukuthula kuleli zwe.
I-USA ithe ibangula iva kwabhibha isilonda
Ubuholi basempumalnga bebusekelwa iminyaka eminingi yiLNA, kwanikwa izintambo zombuso kuGNU emcimbini owabanjelwa eBenghazi.
Ngaphandle kwenselelo yokuhlanganisa izikhungo zombuso zakuleli lizwe ezihlukene kanye nokulungiselela ukhetho ngoZibandlela, lo Hulumeni omusha udinga ukuthi ubhekane nesimo esibi sokuphepha ngenxa yamandla aphethwe ngamaqembu ahlukene angazwani kuleli lizwe.
Ngesonto eledlule isithunywa se-UN uJan Kubis sitshele uMkhandlu Wezokuphepha ukuthi “Amaqembu ahlukahlukene ahlomile ayaqhubeka nokusebenza ngaphandle kwesithiyo, ukwephulwa kwamalungelo abantu kuyaqhubeka cishe kungabi nokujeziswa okuphelele,” kuphetha uKubis.
Emasontweni amabili edlule uNdunankulu walo Hulumeni Wobumbano u-Abdelhamid Dbeibeh uthe uHulumeni wakhe uzovula uphenyo ngemuva kokutholakala kwezidumbu eBenghazi.